Dagaalkii Barcelona iyo Liverpool ee Coutinho oo soo dhammaaday….(Yaa ku guuleystay???) | Garqaad News Agency
Aug 22, 2017 - Comments off
Dagaalkii u dhexeeyay kooxaha Barcelona iyo Liverpool ee ku aadanaa Philippe Coutinho ayaa ugu dameyn soo idlaaday.
Liverpool ayaa ku guuleysatay dagaalka iyadoo ay Barcelona markii ugu horreysay qiratay inay ku guul dareysatay dadaaladii ay ku dooneysay inay ku soo xero galiso kubbad qaabeeyaha reer Brazil.
Kaddib saddex dalab oo laga soo diiday camaaliqada Spain isla markaana uu suuqa ka harsan yahay wax ku dhow usbuuc, waxay garteen inaysan waqtiga iska lumin isla markaana ay meel kale u day daydaaan lacagtii faraha badneyd ay ku iibsadeen Neymar iyagoona aqbalay in Liverpool aysan bishan ka iibin doonin wiilkooda Coutinho.
Agaasimaha ciyaaraha ee Liverpool Michael Edwards ayaa jimcihii soo diiday dalabkii ugu dambeeyay ee ka yimaada dhanka Barcelona kaa oo ahayn mid aad u qaali ah.
Barca waxay soo gudbisay dalab ku kacaya 82 milyan oo bound iyo lacago bareemiyo ah 36 milyan oo bound oo laacibka la siinayo haddii uu kooxda kula guuleysto Champions League isla markaana uu ku guuleysto abaal marinta laacibka ugu fiican adduunka ee Ballon d’Or.
Haddaba haddii ay mar ka hartay shidadii Barcelona, howsha u taala Liverpool waa inay hagaajisaa xiriirka dhaawacmay ee kala dhexeeya xiddigooda Coutinho maadaama uu laacibka u soo gudbiyay warqad codsi uu kooxda kaga tagayo.